Villa Soomaaliya Oo Weerar Afka Ku Qaaday Qaramada Midoobe – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Villa Soomaaliya Oo Weerar Afka Ku Qaaday Qaramada Midoobe
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay Qaramada Midoobey ay si joogto ah uga hadleysay Jahwareerka Siyaasadeed ee ka jira gudaha Soomaaliya, arintaasi waxaa ka hadlay xubno kamid ah Madaxtooyadda Soomaaliya gaar ahaan Xafiiska la talinta Madaxweyne Farmaajo.
Dowladda Soomaaliya ayaa u muuqata in ay si weyn uga Carootay war kasoo baxay Qaramada Midoobey,kaasoo looga hadlaayay doorashadda Koofur galbeed in ay ku dhacdo si wanaagsan oo dadka degaanka ay ku qanacsan yihiin.
Warka kasoo baxay Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa ahaa in doorashada Koofur Galbeed ay u dhacdo ama u qabsoonto hab heshiis, is ogol iyo mas’uuliyad kujirto, taas oo tusaale fiican u noqon karta hab-socodka doorashooyinka Koofur galbeed Soomalaiya.
La taliyaha ammaanka madaxweynaha Soomaaliya Cabdisaciid Maxamed Cali ayaa Bartiisa Twitter-ka ku Soo qoray qoraal kooban oo uu ku sheegay in ay muhiim tahay in Xafiiska Qaramada Midoobey aysan soo faragalin Arrimaha Gudaha Soomaaliya.
Cabdisaciid ayaa yiri : “Ha faragashan arrimaha gudaha ee Soomaaliya, dhaqankaasi waa mid aan la soo dhoweyneyn” ayuu yiri La taliyaha madaxweynaha Soomaaliya.
Shalay ayay ahayd markii QM ay kaga digtay in aan fara gelin aaan lagu sameynin doorashadda Madaxweynaha Koofur galbeed Soomaaliya ee la filayo in ay dhacdo 17 bishaan aynu ku guda jirno.